पूजा परियार काठमाडौं, १ चैत
घरबाट कार्यालय, त्यहाँबाट फेरि घर । आम जागिरे मान्छेको दैनिकी प्रायः यस्तै हुन्छ । मेरो पनि यस्तै छ ।
काठमाडौंको ट्राफिक जाम छिचोलेर घरबाट अफिस पुग्न करिब डेढ घण्टा लाग्छ । सार्वजनिक यातायातमा गर्नुपर्ने यो यात्रा कम सकसपूर्ण हुँदैन । घरबाट कार्यालय नजिकै हुनेले अथवा आफ्नै साधन हुनेले सायदै यस्तो समस्या झेल्नुपर्छ । तर, सार्वजनिक यातायातबाट कार्यालय आउजाउ गर्नेका लागि गाउँतिर ४ घण्टा ‘भारी’ काम गर्नु जस्तै हुन्छ ।
बिहानभर सुत्न मन लाग्छ तर सखारै उठिएन भने समयमै अफिस पुग्न सकिँदैन । त्यसैले अक्सर चाँडै उठेर तयारी गर्ने गर्छु ।
त्यो दिन पनि बिहान सबेरै उठेर घरको कामकाज सकेँ र टिफिन बक्समा खाना हालेर निस्किएँ ।
अफिस त १० बजे पुग्नुपर्ने हो तर साढे ८ बजेतिरै निस्कनुपर्छ । काठमाडौंको सडकको के भर ! घण्टौँ जाम भइदिन पनि सक्छ । कहिलेकाहीँ सिट नै नपाएर ढिला हुन पनि सक्छ ।
सार्वजनिक यातायातमा राम्रोसँग उभिन पनि नमिल्ने गरी मान्छे कोचिएको हुन्छ । १९ जना मात्र चढ्न मिल्ने सानो माइक्रोमा ३० जनासम्मले यात्रा गर्नुपर्छ । सबैलाई उस्तै हतार, एउटै चिन्ता– अफिस ढिला हुन्छ कि ! अक्सर ९ बजेपछि सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने अधिकांश जागिरे नै हुन्छन् ।
सडकमा निस्किएर गाडी कुर्दै बसेँ । ७ वटाजति गाडी आउँदा पनि सिट पाइनँ ।
महिनावारी भएको २ दिन मात्र भएको थियो । फेरि यस्तो बेला अत्यधिक पेट दुख्ने समस्या छ । त्यसमाथि रक्तस्राव । ओहो ! डेढ घण्टा उभिएर यात्रा गर्नु मेरा लागि कम कष्टप्रद हुँदैन ।
त्यसैले सिट खालि भएको वा घुइँचो अलिक कम भएको गाडीको प्रतीक्षामा थिएँ ।
तर, खालि सिट पाउनु त परै जाओस्, यस्तो कुनै पनि माइक्रो आएन, जहाँ सजिलैसँग छिर्न सकियोस् ।
८ बजेदेखि माइक्रो कुरेर बसेकी म, साढे १० बजिसकेको थियो । एउटा माइक्रो आयो । म आश्चर्यचकित भएँ, त्यो माइक्रो म त्यहाँ बस्दाबस्दै एक ट्रिप सकेर फर्किएको थियो । तर, विडम्बना ! म त्यसमा पनि जान सक्दिनँ, त्यति भीड थियो ।
मेरो छेउमा ल्याएर माइक्रो रोक्दै चालकले सहचालकलाई निर्देशन दिए, ‘ओए कान्छा, त्यो बैनीलाई छिराछिरा, एक ट्रिप गरेर आउँदा पनि यहीँ रै’छिन् !’
सायद मेरो त्यो कुराइ देखेर उनलाई पनि दया लाग्यो ।
त्यसपछि सहचालकले माइक्रोको ढोका खोले । कार्यालय पुग्नुपर्ने समयभन्दा म आधा घण्टा ढिलो भइसकेकी थिएँ । अब पनि हिँडिनँ भने आज अफिस नगए हुन्छ भनेर माइक्रोमा चढेँ ।
माइक्रोभित्र त पसेँ तर न बस्ने ठाउँ थियो, न त राम्रोसँग उभिन सक्ने अवस्था नै । उफ् ! अब डेढ घण्टा म पीडाजनक यात्रा गर्नेवाला थिएँ ।
एउटा हात झ्यालमा ढेस्याएँ । खुट्टा बलियोसँग टेकेँ । छेउको सिटमा बसेकी एक बहिनीलाई मेरो ब्याग समाउन दिएँ ।
मान्छे चढ्ने र ओर्लने क्रममा ढोकाबाट अलिक पछाडि सरेँ ।
मलाई निकै गाह्रो भइरहेको थियो । म जस्तै अरू थुप्रै उभिएका थिए । त्यही भीडमा थिए, हेर्दा ३५ नाघेका लाग्ने एक व्यक्ति ।
उनी पछाडिबाट सर्दैसर्दै मेरै पछाडि आइपुगेका थिए । मलाई लाग्यो, उनको गन्तव्य आउन लाग्यो र अगाडि आउँदै छन् । झण्डै १० मिनेटसम्म उनलाई मैले ध्यान नै दिइनँ । त्यसबीचमा उनी पटक-पटक मलाई छुने प्रयास गर्दै थिए, मलाई यस्तो महसुस भइरहेको थियो ।
सार्वजनिक यातायातमा यति सङ्कुचित भएर सोच्नुहुन्न भन्ने लागेर मैले वास्ता गरिनँ ।
तर, ती व्यक्तिको हर्कतले मेरो आशंका अझ बलियो पारिदियो । कोही यात्रु माइक्रोबाट ओर्लन लाग्दा होस् वा ड्राइभरले ब्रेक लगाउँदा, उनले त्यही बहानामा छुन थाले ।
मभन्दा अग्ला थिए । उनको छाती नजिकै टाउको थियो अनि उनको हात मेरो कम्मरमा । मचाहिँ भीडमा यस्तो सामान्य हो भन्ने ठानेर चुपचाप थिएँ । तर, निकै अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको थियो । त्यसैले उनलाई मैले आग्रह गरेँ– ‘दाइ, अलिक राम्रोसँग उभिनुस् न है !’
एक त पेट दुखिरहेको छ, अर्कातिर यस्तो अवस्थामा पनि सिटमा बस्न पाएको छुइनँ । समयमै कार्यालय पुग्न नपाएको चिन्ता, त्यसमाथि ती मान्छेको हर्कतले मलाई कम तनाव भइरहेको थिएन ।
मैले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि ती व्यक्तिले आफ्नो हर्कत सुधारेनन् ।
अब त उनले सीमा नै नाघे । उनले मेरो टी–सर्टबाट हात छिराएर पेटमा सुमसुम्याउन थाले । अहो ! म रिसले चुरचुर भएँ । मेरो सहने शक्तिको बाँध फुट्याे ।
‘के हो तपाईंको पारा ? चुप लागी भनेर जे मन लाग्यो त्यही ? पेटभन्दा माथि पनि छुने मन थियो होला नि होइन ? भीडको मौका छोपेर यस्तो हर्कत गर्न तपाईंलाई लाज लाग्दैन ?’, म रिसाएर बोलेँ ।
त्यसपछि गाडीमा हल्लाखल्ला मच्चियो । एकैछिनपछि ड्राइभरले ती व्यक्तिलाई गाडीबाट ओर्लन भने ।
ती व्यक्ति वास्तवमै नासमझ रहेछन् । ओर्लिने बेला बर्बराउँदै थिए, ‘त्यसको बाउको गाडी हो र अलग्गै बस्न ?’
यति मात्र कहाँ हो र ? ओर्लिएपछि उनले धम्की पनि दिए, ‘पख, भेट भइहाल्छ नि ! यी बाटो त हिँड्छेस् ।’
आखिर गल्ती उसैको थियो तर धम्की उसैले दिएर गयो ।
गाडी अगाडि बढ्यो । पछाडि बसेका एकजना दाइले मलाई समर्थन गर्दै भने, ‘ठीक गर्‍यौ बहिनी । त्यो मान्छेले अरू केटीलाई पनि त्यसै गरेको देखेको थिएँ मैले ।’
त्यसपछि उनले आफू बसेको सिटबाट उठेर बस्न आग्रह गरे । केहीबेरमै ती दाइ पनि आफ्नो स्टेसनमा ओर्लिए ।
मभित्र व्यापक घृणा पैदा भएको थियो– त्यो व्यक्तिसँगै उसले गरेका दुर्व्यवहार देखेर पनि नदेखेजस्तो गरी बस्ने मूर्दा समान मान्छेप्रति ।
मलाई ठीक गर्‍यौ बहिनी भन्ने ती दाइले त्यो मान्छेको हर्कत देखिरहेका रहेछन् नि ! तर, किन चुप लागेर बसे ? जुरुक्क उठेर गालामा थप्पड हान्न किन सकेनन् ? ती दाइ जस्ता लक्का जवान त्यहाँ अरू पनि थिए, जो मुकदर्शक बनेर बसे । त्यसैले त मलाई धम्की दिने हिम्मत गरे ती व्यक्तिले ।
एक मनले भन्यो, ‘जे गरिस्, ठीक गरिस् । यस्तालाई गर्ने नै यस्तै हो ।’
अर्को मन डराइरहेको थियो, ‘कतै त्यो व्यक्तिले बाटो ढुकेर केही गर्ने पो हो कि !’
त्यो घटना मेरो मनसपटलमा अहिले पनि मडारिइरहन्छ । हिजोआज पनि सार्वजनिक सवारीमा चढ्नुअघि मन झस्किन्छ ।
यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यस्ता दुर्व्यवहार सहनुपरेका र यसको प्रतिवाद गर्दा आउने धम्कीका थुप्रै अनुभव छन् । मलाई लाग्छ, म जस्ता थुप्रै युवती यस्तो पीडाबाट अलग छैनन् । कोहीले प्रतिवाद गर्छन्, कोही डराउँछन् र सहन्छन् ।
एक साँझको कुरा हो । ६ बजिसकेको थियो । पुसको महिना अनि काठमाडौंको जाडो । थरथर काँप्दै अफिसबाट घर जानका लागि गाडी कुरिरहेकी थिएँ । त्यही बेला कामकै सिलसिलामा चिनजान भएका एक जना सर मेरो अगाडि आएर बाइक रोके । ‘म ड्रप गरिदिन्छु’ भने । उनीसँग मेरो धेरै राम्रो चिनजान होइन । त्यसैले अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो र भनेँ, ‘थ्याङ्क यु सर ! तर म गाडीमै जान्छु ।’
गाडी आएको थिएन । करिब १५ मिनेटदेखि म त्यहाँ उभिएकी थिएँ । ती सरले पनि बाइक रोकेर मसँग गफ गरिरहेका थिए ।
‘के बाटोमा मोटरसाइकल रोकेर उभिनुभा’को ? जानुस्’, यस्तै भन्न मन थियो तर भन्न सकिनँ । त्यति भन्न सकेको भए किन यति धेरै दुर्व्यवहारको सिकार हुन्थेँ होला र !
रात अबेर हुँदै गए पनि गाडी आएन । सायद ती महाशय पनि यही चाहन्थे । त्यसपछि उनको प्रस्तावमा सहमति जनाउन बाध्य भएँ । उमेरले उनी मेरो बुबा समानका थिए । त्यसैले पनि उनको साथमा जान खासै अप्ठ्यारो लागेन ।
बाटोमा अफिस र कामका बारेमा कुराकानी भयो । हाम्रो यात्रा सहज र सामान्य लागिरहेको थियो मलाई तर त्यो सहजता पनि धेरैबेर टिक्न सकेन । जब ट्राफिक जाममा फसियो, तब उनले आफ्नो वास्तविक रूप दर्शाउन थाले । कुराकानीको बहानामा उनी विस्तारै पछाडि ढेसिन थाले । त्यति मात्र कहाँ हो र ? २ हात मेरा तिघ्रामा राखेर सुमसुम्याउन थाले ।
बाइक वा स्कुटर चलाउने ज्ञान नभए पनि चढ्न भने धेरै पटक चढेकी छु । राम्रैसँग थाहा छ, सवारी साधन चढ्दा कति सहज हुन्छ, कसरी चलाइन्छ भनेर ।
तर, त्यो साँझ ती महाशयसँग बाइकमा बस्दा लाग्यो, म पहिलो पटक बाइक चढ्दै छु । अझ भनौँ, ब्रेक फेल भएको बाइक चढ्दै छु, कहाँ कति बेला के हुन्छ थाहा छैन । एक पटक त झण्डै बाइकबाट झरेको । नचाहेरै पनि बाइकमा अडिन उनलाई समात्नै पर्ने भयो ।
उमेर ४५ को हाराहारी भए पनि बाइक चलाउँदा उनको जोस १६ वर्षे किशोरको जस्तो लाग्थ्यो । उनी सधैँ बाइक त्यसरी नै चलाउँथे वा त्यो दिन मात्र जोस देखाएका थिए, थाहा छैन । घरसम्मै छाडिदिने उनको प्रस्तावलाई आधा बाटोमै अस्वीकार गरेर म ओर्लिएँ ।
‘यहाँसम्म ल्याइदिनुभएकोमा सरलाई धन्यवाद तर बाइकमा यति जोखिमपूर्ण लाग्ने यात्रा गरेको पहिलो पटक हो । अर्को पनि एउटा कुरा सर, छुनु र छोइनुमा धेरै फरक छ’, अन्त्यमा यति भनेर आफनो बाटो लागेँ ।
त्यसपछिका धेरै दिन म गाडी कुरेर बस्दा त्यही ठाउँ हुँदै उनले बाइक हुइँक्याउँछन् । तर, न उनले मलाई सँगै जाऔँ भन्ने आँट गरेका छन्, न त मैले देखेर बोलाएकी नै छु । सायद उनलाई मेरो त्यो ‘डाइलग’ नै काफी भयो ।
समय परिर्वतनशील छ । योसँगै धेरै कुरा बदलिइरहेको हुन्छ । तर, कतिपय मान्छेको सोच अझै उस्तै पुरानो छ ।
रोइकराइ, शरीरमा घाउ, आँसु खसालेको देखिएपछि मात्र हिंसा वा दुर्व्यवहार हो भन्ने खालको मानसिकता धेरैमा पाइन्छ । तर, मैले कतिपय यस्ता दुर्व्यवहार र हिंसा पनि झेलेकी छु, जहाँ मलाई चोट पनि लागेको छैन, आँसु पनि खसेको छैन, मैले खुलमखुला रोइकराइ पनि गरेको छैन । ती घटनाले केवल मलाई मानसिक चोट दिएका छन् ।
हरेक समय र स्थानमा यस्ता दुर्व्यवहार भोग्ने म जस्ता धेरै महिला छन् । कसैले प्रतिकार गर्छन् त कोही भित्रभित्र पिरोलिएर डराएर बस्छन् । जबसम्म यस्ता विषयमा प्रतिकार गर्न सक्ने क्षमता स्वयममा हुँदैन, तबसम्म यस्ता दुर्व्यवहारको सामना गरिहरनुपर्नेछ म जस्ता धेरैले ।
त्यसैले आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्न सक्ने बनौँ अनि हरेक ठाउँमा आफूमाथि हुन सक्ने हिंसाका बारेमा सचेत रहौँ ।
यस्तो अभ्यासको सुरुवात आफ्नै घरबाट गरौँ, अफिसबाट गरौँ । आमाबुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबैसँग यस्ता विषयमा छलफल गरौँ । छोरीलाई मात्र संस्कार सिकाउनुभन्दा छोरालाई पनि छोरी सरह आफ्नो सीमामा रहन, सबैको सम्मान गर्न अनि आफूमाथि होस् या अरूमाथि, हिंसा भएको थाहा पाए त्यसको प्रतिकार गर्न सिकाऔँ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत १, २०७६, ०७:२६:००
#सोमत नभएका पुरुष